Mercedes – AMG GT ၏4– Door Coupe - Drive Myanmar
Drive Myanmar > News > Features > Cars > Luxury Cars > Mercedes – AMG GT ၏4– Door Coupe
Ye Lin Tun
Mercedes – AMG GT ၏4– Door Coupe
ယခုအချိန်တွင် ဥရောပဒေသ၌သာ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသစ်ထွက်ရှိသည့်New Mercedes – AMG GT4– Door တွင် ထူးခြားမှုများစွာပါရှိပြီး အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည့်GT 63 S တွင် စွမ်းဆောင်ရည်အထူးမြင့်မားသည့် မြင်းကောင်ရေကို ထည့်သွင်း ထားသည်။ GT63 S တွင် ( AMG4.0L Twin – turbo V8Engine ) ၊ ( 630 hp ) ၊ ( 627 lb – ft of Torque ) ၊ အင်ဂျင်စနစ်တပ်ဆင်ထားပြီး မြင်းကောင်ရေခြောက်ရာသုံးဆယ်သည်အထူးကြီးမား သည့် ပမာဏဖြစ်ပါသည်။ AMG GT 43 နှင့်GT 53 Models များတွင် ( 3.0 LTurbocharged I6Engine ) များကို တပ်ဆင်ထားပြီး ( GT 43 ) အင်ဂျင်သည် ( 299 hp )ဖြစ်ပြီး ( GT 53 ) အင်ဂျင် သည် ( 367 hp ) ဖြစ်မည်။ ၎င်း၏ Entry – Level သည် GT 43 ဖြစ်ပြီးMercedes – Benz ၏ ထူးခြားဆန်းသစ်သည့် နည်းပညာများစွာကို စုံလင်စွာထည့်သွင်းထားမည်ဖြစ်သည်။( Gearbox ) သည် ( AMG9– Speed Auto gear ) ဖြစ်ပြီး ( Torque Converter ) စနစ်လည်းပါဝင်မည်။၎င်းတွင် ( Rear – biased AWD System ) ပါရှိပြီး (0to 60 mph ) အား (5. 0Seconds ) ဖြင့် အမြန်ဆုံးရောက်ရှိနိုင်ပါမည်။ AMGGT 43 အား ယခုအခါ ဥရောပဒေသဈေးကွက်တွင်သာ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး မကြာခင်ကာလတွင် အခြားသောဒေသဈေးကွက်များသို့တင်ပို့ရောင်းချရန်စီစဉ်ထားပါသည်။ ၎င်း၏ ဈေးနှုန်းသည် – ( USD 111,357 ) ဖြစ်ပြီး AMGGT 53 ၏ ဈေးနှုန်းသည် ( USD 160000 ) ၀န်းကျင်ဖြစ်ပါမည်။
Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ 4-Türer Coupé (2018), Jupiterrot, AMG Night-Paket Exterieur;Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9,4-9,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 215-209 g/km*Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ 4-Door Coupé (2018), Jupiter red, AMG Exterior Night package;Combined fuel consumption: 9.4-9.1 l/100 km, Combined CO2 emissions: 215-209 g/km*
Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ 4-Türer Coupé (2018); Leder Exklusiv Nappa magmagrau/schwarz, AMG Performance Sitze, AMG Zierelement Carbon, Sicherheitsgurte in Silber;Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9,4-9,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 215-209 g/km*Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ 4-Door Coupé (2018); Exclusive nappa leather Magma grey/black, AMG Performance seats, AMG carbon-fibre trim, Seat belts in silver;Combined fuel consumption: 9.4-9.1 l/100 km, Combined CO2 emissions: 215-209 g/km*
ယခုအခွိနတြှငြ ဥရောပဒသေ၌သာ ရောငြးခမွညဖြှစပြါသညြ။ အသစထြှကရြှိသညြ့New Mercedes – AMG GT4– Door တှငြ ထူးခှားမှုမွားစှာပါရှိပှီး အမှငြ့ဆုံးဖှစသြညြ့GT 63 S တှငြ စှမြးဆောငရြညအြထူးမှငြ့မားသညြ့ မှငြးကောငရြကေို ထညြ့သှငြး ထားသညြ။ GT63 S တှငြ ( AMG4.0L Twin – turbo V8Engine ) ၊ ( 630 hp ) ၊ ( 627 lb – ft of Torque ) ၊ အငဂြငွစြနစတြပဆြငထြားပှီး မှငြးကောငရြခှေောကရြာသုံးဆယသြညအြထူးကှီးမား သညြ့ ပမာဏဖှစပြါသညြ။ AMG GT 43 နှငြ့GT 53 Models မွားတှငြ ( 3.0 LTurbocharged I6Engine ) မွားကို တပဆြငထြားပှီး ( GT 43 ) အငဂြငွသြညြ ( 299 hp )ဖှစပြှီး ( GT 53 ) အငဂြငြွ သညြ ( 367 hp ) ဖှစမြညြ။ ၎င်းငျးငြး၏ Entry – Level သညြ GT 43 ဖှစပြှီးMercedes – Benz ၏ ထူးခှားဆနြးသစသြညြ့ နညြးပညာမွားစှာကို စုံလငစြှာထညြ့သှငြးထားမညဖြှစသြညြ။( Gearbox ) သညြ ( AMG9– Speed Auto gear ) ဖှစပြှီး ( Torque Converter ) စနစလြညြးပါဝငမြညြ။၎င်းငျးငြးတှငြ ( Rear – biased AWD System ) ပါရှိပှီး (0to 60 mph ) အား (5. 0Seconds ) ဖှငြ့ အမှနဆြုံးရောကရြှိနိုငပြါမညြ။ AMGGT 43 အား ယခုအခါ ဥရောပဒသစွေေးကှကတြှငသြာ ရောငြးခမွညဖြှစပြှီး မကှာခငကြာလတှငြ အခှားသောဒသစွေေးကှကမြွားသို့တငပြို့ရောငြးခရွနစြီစဉထြားပါသညြ။ ၎င်းငျးငြး၏ စွေးနှုနြးသညြ – ( USD 111,357 ) ဖှစပြှီး AMGGT 53 ၏ စွေးနှုနြးသညြ ( USD 160000 ) ဝနြးကငွဖြှစပြါမညြ။
Tags International NewsNews
PREVIOUS 22 Oct 2018
SUV တစ်စီးရဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အသစ် (သို့) GAC GS4
NEXT 22 Oct 2018
Volvo V 60 Cross Country ၏ 2019 Model ထွက်ရှိ၍ လာပါပြီ။